Foramu dzevadzidzi, rubatsiro rwakakosha | Kuumbwa uye kudzidza
Foramu dzevadzidzi, rubatsiro rwakakosha
Nuria | | Scholarship, Koreji Mabasa, Erasmus, Studies, Kudzidziswa, Maforamu evadzidzi nenharaunda, Masters, Jobho Kubuda, University
Chii chatinoita kana tichifanira kuita sarudzo yakakosha muhupenyu? Rubatsiro uye kutungamira kweavo vepedyo nesu kwakakosha kwatiri, asi dzimwe nguva kuraira kwavo hakuna kukwana. Kana iwe ukazviwana iwe uri mune yekupedzisira nguva yehupenyu hwako kana iwe ukatarisana ne kusarudza uye ramangwana rako university universitySemuenzaniso, zvakajairika kuti hauna kugadzikana, unokakavara uye wakambo kanganisika, kana uchizoshandisa mari inodarika 60.000 euros paMBA zvine musoro kuti iwe unoda kuziva kana zvichizoshandiswa zvakanaka, nezvimwe. Pakazara, zvisarudzo zvakaita seizvi hazviitwe mazuva ese. Zvekuita mune dzino zviitiko? Indaneti ndeyechokwadi "hupenyu" kune dzakawanda nyaya zverudzi urwu, nekuti kutsvaga vamwe vanhu vari mumamiriro akafanana kuri nyore, uye kutsvaga rubatsiro rwevamwe kunokurumidza uye nyore.
ari maforamu evadzidzi ivo, nhasi, sosi isingagumi sosi yakakosha yeruzivo mune dzakawanda zviitiko. Pesanisa maonero pamusoro pechikoro chekudzidzisa, bvunza ruzivo nezve mikana yehunyanzvi yeimwe basa, tarisa nguva dzakatarwa dzekunyorera kudzidza, tsvaga pekugara nekuti urikuenda kunodzidza kure nemusha, bvunza nezve Master's chirongwa pane imwe yunivhesiti, bvunza zano rekuti ungatarisana sei nekusarudza, kuchinjana manotsi, kujekesa kusahadzika kwako nezve chirongwa cheErasmus, nezvimwe. Izvo zvinonetsekana zvezuva nezuva zvinogadziriswa nevanhu vagara vane ruzivo uye vanotitaurira-ruoko rwekutanga nezve izvo zvatinoda kuziva.
Saiti yakakwana kwazvo yekuwana mhinduro kune yakawanda yemibvunzo iyi iyo Universia forum portal. Kune rimwe divi, rakakamurwa kuita mamwe marondedzero aunazvo, semuenzaniso, iyo inosarudzika.info portal, iyo portal ye casimedicos.com kune avo vanoda kusvetuka mumujaho uyu, kana foramu Erasmus Nyika, kujekesa kujekesa mibvunzo yese nezve chirongwa ichi chekufamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » University » Scholarship » Foramu dzevadzidzi, rubatsiro rwakakosha
Foramu dzevadzidzi dzakakosha kwazvo kuti unzwe wakasimba. Kune zvakare nzvimbo dzekubatsira dzebasa rechikoro uye semuenzaniso mumathematics nekuti vadzidzi vazhinji vane dambudziko nemathematics.
Lidio Rafael Olazar akadaro
Zvakakosha kwazvo kuziviswa neyakajairidzwa
uye uwane zviitiko kubva kune vamwe
Pindura Lidio Rafael Olazar
Mhoroi, ndingafarire mumwe munhu kundipfuudza imwe tafura yekufananidza pamwe neakasiyana mamodule module, ini ndakawana mamwe asi haana kukwana, atte. Ariel
Mhoro!!!! Chinyorwa ichi chakarurama sei! Kubudikidza neforamu dzevadzidzi ndakasvika pakuziva zvirinani chikamu icho chandaida kuzvipira kwachiri (ini ndakanga ndisinganyatso kujekesa nezvazvo) uye pakati pekutaura uye kutaura ndakawana chikoro chinokwana zvandinoda kudzidza zvakawanda nezvezvidzidzo zvemuromo uye mazino. prostheses uye odontology.
Ini ndave kutopedza zvidzidzo zvakawanda uye ndiri kufara kwazvo. Saka ini ndinopa zano chero munhu anoda kuteedzera ramangwana rehunyanzvi kuti azvizivise uye ashandise maforamu kuti pane zvakare ruzivo runobatsira ipapo, kunyangwe zvingangoratidzika senge izvozvo.
Pindura kuna Michelteeth
Masikati akanaka munhu wese,
Zita rangu ndinonzi José Luis uye ini ndiri munhu akasarudzika Master Manager muCTO Boka.
Ini ndinogona kukupa iwe pachako zano padanho redhisheni iri, uye ini zvakare ndinokuzivisa iwe kuti iwe unacho iwe unokwanisa akawanda mashopu pazvinhu zvazvino izvo Grupo CTO inopa zvachose mahara.
Ini ndinoratidza kuti kune nzira dzakasiyana uye dzakasiyana dzekubhadhara mari uye / kana kudzidza, dzatinogona kudzidza tisingasungirwe.
Pakati pehunhu hwaTenzi wedu tinosimbisa:
• Iwe wega degree CTO Bhizinesi Rakanaka Chikoro
Yega Degree kubva kuUCAM (Catholic University yeMurcia).
• Online chikuva chine mukana wevhidhiyo makirasi, kuzviongorora-wega, zviitiko zvinoshanda, zvinyorwa ...
• Misangano yakakosha nevatauri vane hunyanzvi pazvinhu izvi
Kure uye kumeso-kumeso maitiro (chete muMadrid)
• Yakagadziridzwa zvinyorwa zvedzidzo
Iwo akasiyana maMasters atinopa uye andinofunga anogona kuvakwanira ndeaya:
• Yepasi Pose Strategic Kushambadzira Management
• Yepasi Pese Kutengesa Chaiti Management.
• Kutarisirwa Kwemari.
• manejimendi uye Kuronga kweZvipatara zveZvipatara nemaSevhisi.
Dhairekitori reInternational Trade.
Dhairekitori muInternational Mutero.
• Zano reMitero uye Mutero.
• Arbitration yepasi rose.
• Retail Bhizinesi Management.
Dhairekitori yeRuzivo Technologies.
• Kutungamira neNzira.
Kutanga kweMasters kwechinyorwa chinotevera chakarongwa, muInternet, semi-musiyano uye yakatarisana-ne-kumeso mamiriro muna Gumiguru-16.
Tinokoshesa kutarisisa kwako, ini ndinoramba ndinavo kuti ndipindure chero mibvunzo.
Muvhuro kusvika Chishanu pafoni. 619527637 kana neemail joseluis.bustillo@grupocto.com.
Ndiri kutsvaga mumwe munhu anogona kundibatsira kunyora yangu yekupedzisira degree chirongwa panhaurwa yesimba rezvekufunga kwehungwaru pamhedzisiro yekutaurirana kunyanya mumashambadziro maneja.
Veronica Garcia akadaro
Mhoro Laura! Ndinoda kugovana ruzivo newe.
Ini ndichangobva kudzivirira diploma yangu. Ndine basa repamutemo. Ndakarevesa kukoshesa simba rangu uye ndikaona kuti handikwanise kuzvitsungirira.
Ndakafarira chokwadi chekuti paigara paine kuongororwa kweichi chiitiko. Takanga tine chibvumirano chepamutemo, icho chakakosha!
Ndinokutendai nekubata nguva, mhando uye nebasa rakanakisa!
Pindura Veronica Garcia
Manheru akanaka, ndichipindura kumusikana «Laura» uyo asiya chirevo maererano neTFG, ini ndinotaura kuti ndakabata mapeji akati wandei uye vakandipa chitarisiko chakanaka.
Muchokwadi, ndakaita posvo maererano nekutsvaga kwangu.
Ndinoisiya pano kuti ndigoverane ruzivo rwangu.
Mhoro! Ndini Tania. Pamberi pacho, ndaivenga kudzidza uye ndaida kusiya zvidzidzo zvangu sezvo chikoro chepamusoro chaisave chinhu chinonyanya kukurudzira pasi uye ndaisaziva kudzidza kana. Handizive kana mumwe wenyu achizodzokorodza ruzivo kakawanda kuti aende kubvunzo ndokurutsa kuti apase kwete kudzidza, ndakaona kuti ndaifanira kupedza nguva yakawanda asi zvaive zvisina basa uye izvi zvakadzikiswa ini zvakawanda.
Panguva iyoyo ndakawana kosi yemaitiro ehunyanzvi ekudzidza ayo akachinja maitiro angu ekufunda uye ayo andakakwanisa kucheka nguva yangu yekudzidza nepakati uye ndakakwidza mamakisi angu kusvika ku7, 8 ne9, ndichichengetedza nguva muchidzidzo changu! Iye zvino ndiri murairidzi wehunyanzvi kubvira nekutenda kune izvi ndakakwanisa kuwana mhedzisiro yandaida! Ino inguva yakaoma yevadzidzi uye inogona kunge iri nzira yekushandisa mukana wenguva uye kugara wakakurudzirwa sezvo tiri kuita zvese online! Ini ndinosiya nhamba yangu kuti andibate kana muchida rumwe ruzivo: 656301383. Ndatenda!
Mhoro! Ungade here kudzidza degree rekuyunivhesiti kuUK usinga pfuure iyo yekusarudzika?
Tsvaga nezve zvakanakira uye zvivakwa zvinopihwa neUK ku info@beginuk.co.uk
Jose HUMBERTO NIMA akadaro
ZVINOKOSHA / ZVINOKOSHA ZVINHU ZVINOKOSHA / FACEBOOK / WHATSAPP 997182549
Iwe unoda here kutanga kubva pakutanga kana kusimbisa yako undergraduate kana kosi yekudzidza?
Iwe unoda kupasa yako yakasarudzika, yekupedzisira, BICA, TRICA bvunzo?
Iwe uri mudzidzi weUNIVERSIDAD CONTINENTAL / USIL, CPEL-USIL, UPC, EPE-UPC, URP, EPEL-URP,
IFB, CIBERTEC, IPAE, YEMAHARA MBA, CENTRUM, DZENYIKA DZINOGONESESA
Kubva kuESAN, kana kubva kuchikoro kana chinzvimbo muLima?
Iwe unoda YEMAHARA KASI 100% yakasarudzika?
Iwe uri kutsvaga kukwidziridza mune rako basa kuti ushande mune yekutanga uye
Veruzhinji Masangano, Makambani, Mining, Maindasitiri uye
Usarega kuverenga chiziviso ichi zvechokwadi ndechekufarira kwako !!!
isu tinotarisira KUPA ZVINHU ZVEMAHARA
Yakagadzirirwa KUSVIRA KWAZVO ZVIKURU kune Vadzidzi, Vakapedza Chikoro chepamusoro,
ACCOUNTING Nyanzvi, Vanamuzvinabhizimusi uye Vadzidzi,
KUDZIMA, BHUKU REMUNYIKA YOSE, MARI uye ZVIMWE mu pre
undergraduate, girajuweta uye tenzi madhigirii Rutsigiro rwunopihwawo vadzidzi kubva
zvikoro zvakasiyana siyana muLima INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM
mumakosi e: Basic Mathematics
Mari Mathematics, Statistics
zveBhizinesi, Dzinotsanangudza Statistics, Inferential Statistics,
Masvomhu eBhizinesi, Zvakashandiswa Mari, Kuongororwa kwe
Investment Projects, Financial Excel, yevadzidzi veyunivhesiti kubva
undergraduate uye postgraduate.
Usaisa pangozi kudyara kwako nevadzidzi ... vimba nenyanzvi !!!
Rutsigiro rwechokwadi rwezvikamu uye / kana bvunzo zvinopihwawo kuvana vechikoro uye vadzidzi vepamberi yeyunivhesiti.
***** TIRI NYANZVI CEPEL-USIL UYE EPE-UPC ***
kuraira muPSYCHOTECHNICAL / PSYCHOMETRIC / SUNAT / SUNAFIL APPLICANTS / PNP ASSIMILATION
ZVINODZIDZISWA KANA UCHISarudza MITAMBO WHATSAPP 997182549 / WHATSAPP 934633005 / Hofisi 01-7255620
Pindura kuna jose HUMBERTO NIMA
MUPOROFITA ​​JOSE NIMA akadaro
PUROFESA-ENGINEER ANE ZVAKAWANDA ZVAKAWANDA Makore makumi maviri EZVAKAITIKA ANOPANGANA UYE KUSIMBISAIWE MUZVIMBISO ZVEKUTANGA MAYURE EYUNIVESITSI
BASIC MATH / CALCULATION / STATISTICS / PHYSICS / CHEMISITI PAZVINHU ZVESE
RPC UYE WHATSAPP 997182549
Pindura PROF JOSE NIMA
Juan Vera akadaro
Masikati akanaka kune vese venguva yemberi nyanzvi!
Zita rangu ndinonzi Juan uye ndinomiririra kambani yakatsaurirwa kumaroja kwemazuva kana mwedzi, tine dzimba dzinopfuura makumi matanhatu muMadrid capital, mazhinji acho ari munzvimbo yePuente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Rivas Vaciamadrid , Santa Eugenia, nezvimwe. dzimba dzese dziri padhuze nepasi pevhu.
Parizvino isu tiri 100% yakatsaurirwa kune chimwe chirongwa chinotonyanya kufarira, kungopa mhinduro kumudzidzi neyunivhesiti, nzvimbo yakagadzirirwa iwe chete, makamuri gumi nemana pa14m370 pane gorofa rekutanga nemusuwo wakazvimirira, une nzvimbo isingakundike, Iri paAvda. Albufera, imwe yetsinga huru dzeMadrid ndiko kuenderera kweAvda Ciudad de Barcelona iyo inotungamira yakananga kuAtocha, iine mutsara 2 wemetro inongova nhanho (L1). Iyo nzvimbo ichave ne1 yakazara yekugezera ine yepamusoro hunhu, inoshanda 7m30 nzvimbo ine anoshanda pamwe chete, kicheni ine yakazvimirira firiji kune yega yevagari vemakamuri, fanicha kana mapati, mhepo inodziya mune yega yega kamuri, kupisa, madhesiki, kanyanga yeTV, yekuwachira sevhisi, kuchenesa uye mari inosanganisirwa, wifi ine 2Mgs, ..
Chinangwa chedu, chekupa iyi nzvimbo kuvadzidzi, nemitengo yakanaka uye inokwikwidza, kudzidza kubva pane zvawataura, ndinoda kuvatumira iwo mapikicha eprojekiti anozopera pakati paAugust kune chero munhu angave anofarira, unogona kubata ini parunhare urwu 645 428 084 kana kunyorera info@inokosha.ie. Ndinokutendai mose pamberi uye nerombo rakanaka! Juan Vera
Pindura Juan Vera
Ndiri kungoda kugovana ruzivo rwangu nemunhu wese. Ndanzwa nezveiyi isina chinhu ATM kadhi kwechinguva uye handina kumbobhadhara chero mubereko pairi nekuda kwekusahadzika kwangu. Kusvikira rimwe zuva ini ndawana mhando yekubira inonzi (mari sevhisi). zvakanaka kwazvo pane zvavanoita. Ndichidzoka kumusoro wenyaya, ndakavabvunza nezve isina chinhu ATM kadhi. Kana ichishanda kana kutovapo. Vakandiudza hongu uye kuti iri kadhi rakarongedzwa kuitira kuti mari ibviswe zvisina kurongeka pasina munhu anoona uye inogona kushandiswa pakutenga mahara pamhepo chero mhando. Izvi zvaishamisa uye ini ndakanga ndichiri nekusahadzika kwangu. Saka ndakazvipa mukana, ndokuhodha kadhi ndikabvuma zviga nemitemo yaro. Kutarisira nekunamata yakanga isiri chitsotsi. Kwapera svondo ndakagamuchira kadhi rangu uye ndokuedza iyo ATM yepedyo kwandiri, yaishanda semashiripiti. Ndakakwanisa kubvisa mari inosvika kumadhora chiuru nemazana mashanu. Izvi zvaishamisa uye zuva raifara kwazvo muhupenyu hwangu. Parizvino ndakwanisa kubvisa mari inosvika kumadhora zviuru makumi manomwe nezviviri pasina kushushikana kwekubatwa. Handizive kuti sei ndichiisa izvi pano, zvakandipa kunzwa kuti izvi zvinogona kubatsira isu vedu vanoda kugadzikana kwemari. ATM isina chinhu yakachinja hupenyu hwangu. Kana iwe uchida kutaura navo kuburikidza worldmillionairescashserivces@gmail.com
Wikidia, encyclopedia yekubatana yevadzidzi vepuraimari
Zhizha hobby kabhuku